Degso Trash Truck Simulator APK loogu talagalay Android
Degso Trash Truck Simulator
Bilaash Degso loogu talagalay Android (96.00 MB)
Degso Trash Truck Simulator,
Simulator Trash Truck Simulator waa jilitaan baabuur oo aad ku ciyaari karto aaladahaaga mobilada oo leh nidaamka hawlgalka Android. Waxaad ku tusaysaa xirfadahaaga wadista ciyaarta halkaas oo aad isku daydo inaad hore ugu socoto bartamaha magaalada iyo waddooyinka cidhiidhiga ah.
Simulator Trash Truck Simulator, jilid baabuur wadista oo leh sawirro xallinta sare leh, waa ciyaar aad isku daydo inaad muujiso xirfadahaaga. Ciyaarta dhexdeeda, waxaad xakameysaa gawaarida qashinka oo waxaad isku daydaa inaad fuliso dhowr hawlood. Waxaad soo uruurisaa qashinka, waxaad geysaa xarumaha qashinka oo si taxaddar leh u wad. Waxaad muujin kartaa xirfadahaaga adoo raacaya xeerarka waddooyinka oo aad yeelato waayo -aragnimo dhab ah. Waxaad dooran kartaa gawaarida kala duwan ee ciyaarta, oo leh gawaari aad u faahfaahsan. Ciyaarta, oo aad ku ciyaari karto xaalado kala duwan oo cimilada ah, ayaa sidoo kale ku jira nidaam gaadiid oo horumarsan. Markaa waxaad dareemi kartaa inaad ku jirto taraafikada dhabta ah.
Ciyaarta, oo waliba leh noocyo kontarool oo kala duwan, waad u xakameyn kartaa sidaad rabto. Waxaad habayn kartaa baabuurkaaga xamuulka ah adiga oo lacag ku kaydinaya ciyaarta halkaas oo aad ku tijaabin karto xirfadahaaga wadista baabuurka ee dhabta ah. Ha moogaan Simulator Trash Truck Simulator, ciyaar ay carruurtu si fudud u ciyaari karaan.
Waxaad ku soo dejisan kartaa ciyaarta Simulator Trash Truck Simulator qalabkaaga Android.
Trash Truck Simulator Noocyada
Cabirka Faylka: 96.00 MB